Induction waya Kuchenesa Maitiro emhangura waya, simbi waya, yendarira waya, nezvimwe
Mukugadzirwa kwetambo yesimbi, waya yemhangura, waya yendarira, uye simbi kana kudziyisa mhangura tsvimbo tsvimbo, akasiyana marapirwo ekurapa maitiro anoshandiswa, senge waya kudhirowa, tempering mushure mekugadzira, kudzima kupisa kurapwa mune zvakakosha zvinodiwa, induction annealing usati washandisa sezvinhu zvakasvibirira, nezvimwewo Pane zvikumbiro zvakawanda izvozvi nezve kupisa kwepamhepo nekumhanyisa kumhanya, dzakasiyana tembiricha renji, chaiyo simba kuburitsa, uye tembiricha kudzora pane diki dhayamita waya. nekudaro, chaiyo yekupisa nzira ndiyo inofanirwa. Kuve nemukana weakakwira degree of otomatiki mashandiro (kusanganisira inochinjika kumisikidza yenguva, tembiricha, simba), HLQ's induction Heating mudziyo inoonekwa kunge yakakodzera kwazvo kupedzisa kupisa kurapwa kwetambo netambo. Inokwanisa kubvuma kudzora kure kwekutanga / kumira, kupedzisa magetsi kugadziridza, kushanda maawa makumi maviri nemaviri / zuva, kuitisa nekukurumidza simba kuburitsa, uye kugadzira yekumhanyisa muchina kudzima zvinoenderana netembiricha yekudzora chiratidzo, yedu induction yekupisa zvigadzirwa zvinogona kusangana nyore nyore akasiyana siyana tambo yazvino uye waya kudziyisa.
Chii chinonzi induction waya uye waya kudziya?
HLQ Induction Equipment Co inopa mhinduro kune akawanda maficha kubva kune echimiro feri uye isina-feri waya, mhangura nealuminium tambo uye makondakita kune fiber optic kugadzirwa. Iwo maficha akapamhamha zvakanyanya anosanganisira, asi asina kuganhurirwa, kuumba, kuumba, kupisa kurapwa, galvanizing, kupfeka, kudhirowa nezvimwewo patembiricha kubva pamakumi gumi emadhora kusvika pamadhigirii chiuru nemazana mashanu.
Iwo masisitimu anogona kushandisirwa seyako yakazara yekupisa mhinduro kana seyokuwedzera yekuvandudza kugadzirwa kwechoto chiripo nekuita sepakutanga kupisa. Yedu induction yekupisa mhinduro vane mukurumbira nekuda kwekuumbana kwavo, kugadzirwa uye kugona. Ipo isu tichipa akawanda mhinduro, akawanda akagadziridzwa kuzadzisa zvaunoda chaizvo. Kuvandudza masisitimu akagadziridzwa pane zvaunoda nemhinduro dzakagadziriswa ndeye HLQ Induction Equipment hunyanzvi.
Chaizvoizvo mashandisirwo anosanganisira:
Kuomesa poso kuchenesa kana kubvisa mvura kana solvent kubva kupfeka
Kurapa kwemvura kana poda yakavakirwa pakapfeka. Kupa yakasimba chisungo simba uye pamusoro pedza
Kupararira kwesimbi yekupenda
Kupisa kwekutanga kwekubuda kwepolymer uye yesimbi kupfeka
Kurapa kwekupisa kunosanganisira: kushushikana kudzikisira, kutsamwa, kuwedzera, kupenya kwakajeka, kuomesa, patenting nezvimwe.
Pre-kudziyisa kweinopisa-kuumba kana kugadzira, kunyanya kwakakosha pakujekesa alloys
Induction Heating inoshandiswawo kupisa, kutumira kupisa kana kunyorera tambo yesimbi pamwe nekubatana / kubvongodza kwekudzivirira kana kuchengetedza mukati mezvinhu zvakasiyana-siyana zvemicheka. Kupisa mashandisiro kunogona kusanganisira kupisa waya usati waidhonza pasi kana kuburitsa. Kupisa kwepositi kwaiwanzo sanganisira maitiro akadaro ekubatanidza, kusimbisa, kuporesa kana kupukuta pendi, zvinonamatira kana zvigadzirwa zvekudzivirira. Kunze kwekupa kupisa kwakaringana uye nekukurumidza nekukurumidza kumhanya kumhanya, iyo yekubuda simba yeiyo induction yekupisa magetsi magetsi inogona kudzorwa kuburikidza netambo kumhanya kwesisitimu muzviitiko zvakawanda. HLQ inogovera akasiyana siyana emagetsi ekupisa emagetsi ayo anogona kushandiswa pane izvi maitiro.
KUPONESA WIRE KUPFUTA Midziyo
HLQ UHF uye MF Series yeInduction Heating Systems inopa huwandu hwakawanda hwemasimba musimba kubva ku3.0 kusvika 500kW, inoenderana nehunyanzvi hwekuita mune dzakasiyana siyana zvinoshandiswa nevatengi. Yakagadzirwa neanogadziridzwa tangi capacitance uye akawanda-pombi kuburitsa shanduko, iyo HLQ Induction Heating Systems inoshanduka uye yakavimbika kusangana inodikanwa mamiriro ekugadzira anodikanwa ne induction waya kupisa uye tambo yekupisa michina.
Categories Technologies Tags annealing mhangura waya, kuvhara waya wechipfuva, annealing the wire, waya kudziyisa induction, induction yendarira waya kupisa, induction mhangura tambo kupisa, induction waya yemhangura, induction simbi waya kupisa, induction waya hita, induction waya kupisa, waya hita, waya kudziyisa, waya induction kupisa mhinduro Post navigation